Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo – 4Jehovah (Yehowa)
Category: Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo
Enti Yesu wui wɔ mmeamudua anaasɛ asendua so?
Woyii mfonini yi fii Ɔwԑn Aban nsԑmmaw, Dԑn na What Does God Require of Us?, 1996, p. 7
.:Enti Yesu wui wɔ mmeamudua anaasɛ asendua so?
“Yesu anwu wɔ mmeamudua so. Owui wɔ dua so. Hela asɛmfua no a wɔkyerɛɛ ase ‘mmeamudua’ wɔ Bible mu no kyerɛ dua koro pɛ”- Dɛn na Onyankopɔn Hwehwɛ fi yɛn Hɔ, 1996, kr 23.
Dɛn ne “dua koro” no a wɔde dii dwuma wɔ Yesu bere so?
“Stauros” wɔ Apam foforo no mu kyerɛ dua biako a wɔde si fam na biako bom wɔ natifi sɛ mmeamudua ma onya sɛso te sɛ‘Ƭ’. Mpɛn pii no asɛmfua mmeamudua no kyerɛɛ dua a wɔde bi abeamu sɛ mmeamudua (Ƭ)”-The Zonderyan Pictorial Encyclopedia of the Bible Vol 1, 1976, pg 1037-1038
So Yesu wɔde prɛgō biako anaasɛ mmienu na wɔbɔe No ne nsam? Continue reading “Enti Yesu wui wɔ mmeamudua anaasɛ asendua so?”
Author WebmasterPosted on February 6, 2013 January 24, 2015 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Mmeamudua
So Yesu yɛ wo ntamgyinafo?
“Efisɛ Onyankopɔn biako pɛ na ɛwɔ hɔ ne ntamgyinafo biako nso na ɛwɔ Onyankopɔn ne onipa ntam. Onipa pa Yesu Kristo no nea ɔde ne ho maae sɛ agyede maa nnipa nyinaa…”-1 Timoteo 2:5-6
“Ntamgyinafo: onnii a ogyina afanu mfinimfini pa kyɛw sɛnea ɔbɛka wɔn baanu abom asomdwoe mu”–Insight on the Scriptures vol 2 kr.360
Saa Yesu nnyɛ ntamgyinafo a ɔmaa asomdwoe baae wone Onyankopɔn ntam a, Na ɛyɛ hena?
“Yesu Kristo nnyɛ ntamgyinafo mma Yehowa Nyankopɔn ne adasemma nyinaa. Ɔyɛ ntamgyinafo ma N’agya Yehowa Nyankopɔn ne ɔman Yesrael Honhom fam nnipa a wɔn dodow yɛ 144000 pɛ”-World wide Security Under the Prince of Peace, kr. 10 Continue reading “So Yesu yɛ wo ntamgyinafo?”
Author WebmasterPosted on February 6, 2013 February 6, 2013 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nkwagye
Enti Yesu Nyanee sɛ Ɔbɔfopɔn Mikael no?
“Ɔko baa ɔsoro: Mikael [nea ɔyɛ Yesu Kristo a Onyanee fii awufo mu no] ne… ɔtweasɛe no koe….
Wiɛ, enti dɛn na ɛtoo Yesu honam nipadua? So ɛyɛ asuafo no na wohui sɛ Yesu ɔbodan no da mpan? Yiw, efisɛ Onyankopɔn yii Yesu honam fii hɔ..”- Traa Ase Daa (Live Forever) kratafa 21, 144, 145
Nipadua bɛn na Yesu hyɛɛ bɔ sɛ obenyane afi owuo mu no? Continue reading “Enti Yesu Nyanee sɛ Ɔbɔfopɔn Mikael no?”
Author WebmasterPosted on February 6, 2013 December 23, 2015 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Owu Akyi Asetena, Owusɔre
So Yehowa Adansefo Yesu No ɛno Ara ne Yesu no a Bible Kyerɛkyerɛɛ no?
Woyii mfonini yi fii afe 2007 Ɔwɛn Aban ɔmantam Nhyiam “Di Yesu Kristo Akyi”
“Nanso misuro sɛ sɛnea ɔwɔ no de n’anitew daadaa Hawa no saa ara na mo adwene bɛdan afi ntease tiawa ne ɔsom kronn a ɛsɛ Kristo no. Efisɛ sɛ obi ba mo nkyɛn bɛka asɛmpa fa Yesu foforo a yɛnnkae ne ho asɛmpa a….”—2Korintofo 11:3-4
So yebetumi Anya Nkwagye denam Yesu a ɔnyɛ nea Bible Kyerɛkyerɛ no a Yebedi N’akyi?
Continue reading “So Yehowa Adansefo Yesu No ɛno Ara ne Yesu no a Bible Kyerɛkyerɛɛ no?”
Author WebmasterPosted on February 6, 2013 January 24, 2015 Categories Nkyerԑwdenhoma woayԑ ama Yehowa Adansefo, ƆsԑmpakaTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nyankopɔn Baasakoro No